TIM Antananarivo : sosialy kokoa manomboka eto
Tsy mbola nihalangalana tamin’ny tolona hamerenana ny Filoha RAVALOMANANA ny antoko Tiako I Madagasikara hatramin’ny 2009 no mankaty. Fototra ijoroan’ny fitakian’ny vahoaka Malagasy maro an’isa rahateo izany tamin’ity krizy vokatry ny fanonganam-panjakana ity. Manomboka izao kosa anefa dia ezaka hanamorana ny andavan’andron’ny mpiray tanindrazana no himasoan’ny TIM sampana Antananarivo renivohitra. Izany no hatao dia noho ny fahatsiarovana fa ny fahombiazan’ny asa iaraha-manao no nentin’ny Filoha RAVALOMANANA nanasoa ny mpiara-belona nandritra ny fotoana nitondrany ny Firenena.
Na dia mamaivay aza ny raharaha politika dia tsy tokony hadinoina fa efa mianjady eny amin’ny isam-baravarana ny vokatry ny krizy koa tsy tokony hatao faralahim-pahamehana ny fifanomezan-tanana amin’ny mpiara-belona. Tetikasan’ny TIM Antananarivo renivohitra sahady ny hanampiana zaza an’arivony amin’ny fitaovana ho enti-miatrika ny taom-pianarana 2012-2013. Mialoha izany anefa dia forazaza faobe no antomotr’ezaka indrindra kasain’ny mpikatroka ho tanterahina amina boriborintany maro eto Antananarivo. Ankoatra izay dia natolotra tamin’ny fomba ofisialy androany ihany koa ny birao mpiara-mitantana izany rantsan’ny Tiako I Madagasikara izany ary nanamafy izy ireo fa mbola mitaky ny hanaovana ny fihaonan’ny Filoha RAVALOMANANA sy i tgv eto Madagasikara satria samy Malagasy no hiresaka ary Madagasikara no nahita krizy noho ny fanonganam-panjakana.
Fanafihana ny HJRA : « gros bras » indray izao … (+vidéos)
Nandefa olona vitsivitsy hanakorontana tao amin’ny HJRA ny ministeran’ny fahasalamana androany araka ny filazan’ny sendikan’ny mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy. Tokony tamin’ny sivy ora maraina dia nahatazana olona nizara vola manoloana ny hopitaly ireto mpikatroka sendikaly ireto ary mpiasan’ny fahasalamana ihany ny iray tamin’ireo mpizara vola ireo. Taorian’izay dia niditra ny hopitaly ireto olona vitsivitsy ireto izay nilanja sora-baventy nitaky hoe « tsaboy ny mararinay ».
Sary "mercenaires" FATE
Rehefa tonga teo amin’ny sapanana misy ny sora-beventin’ny sendika anefa izy ireo dia ny nandroba ireto farany no nataony fa tsy nijanona tamin’ny fanehoan-kevitra. Araka ny fitantaran’ny nanatri-maso dia nihemotra saika hitaky ny volany ireto andian’olona ireto dia niteny ny mpibaiko azy ireo fa « tokony mahazo iray amin’ireo ianareo vao mirava ». Raha ny fahitan’ny dokotera sy ny « paramed » ny zava-nitranga dia saika nirahina hanakorontana tao amin’ny HJRA ireto olona ireto ka raha nampiseho fanoherana ny sendikalista dia niditra an-tsehatra ireo « gros bras » efa nihaodihaody teny amin’ny manodidina. Nahafa-po ny mpandrindra arak’izany ny ny fahatonian’ireo mpitolona na dia nandrangitra mafy aza ireto mpikarama an’ady ireto.
Manoloana izany rehetra izany dia nanao fanambarana ny sendikan’ny mpitsabo mpiasam-panjakana sy ny sendikan’ny mpitsabo mpanampy. Ny mahagaga fotsiny dia mbola mametraka fanantenana amin’ny filan-kevitry ny ministra sy ny filan-kevitry ny governemanta ihany ireto sendikalista ireto na dia efa fantany tsara aza fa tsy misy mihaino ny fitakiany raha mbola io fitondrana io no eo.
Tsy mitsabo vahoaka …
Nanao antso avo tamin’ny vahoaka ireto sendikan’ny fahasalamana ireto mba tsy handairan’ny fandrangitana. « Ny fitondrana no manakana ny fitsaboana ny vahoaka » hoy izy ireo « fa tsy izahay no tsy te-hitsabo ». Fantatra androany ihany koa fa nahazo fandrahonana ho faty ireo mpitarika ny hetsika rehefa tsy nanaiky notambazana. Raha vao navoaka mantsy i Valérien, araka ny fitantaran’izy ireo, dia nasaina niresaka tamin’ny mpiara-mitolona aminy mba hampitsahatra ny fitakiana. Saingy rehefa tsy nanaiky hanao izany izy dia nilazana fa « tsy maintsy matinay ianareo mpitarika ireo ». Fomba fiasa efa ahafantarana ny FATE izany fiheboana ho tompon’ny ain’ny mpiray tanindrazana izany ary mbola tohizany raha ny tatitra nataon’ny mpitsabo sy ny paramed androany.
Fandrahonana ho faty :
Mbola tsy hiasa …
« Tsy mbola miasa izahay » hoy ireto mpiasam-bahoaka ireto. Nambaran’izy ireo fa miandry izay valintenin’ny governemanta sy ny fitondrana izy ireo vao hanapa-kevitra momba izay tohin’ny hetsika ataony. Mivonona hanotrona ny sekretera jeneralin’ny sendikan’ny mpitsabo mpanampy ihany koa izy ireo ny Alarobia hoavy izao. Io ihany koa no andro kasain’ny « cellule de crise interministérielle » hanombohana ny fitokonana faobe. Rehefa nanontaniana momba ity hetsika farany ity ireto sendikan’ny fahasalamana ireto dia nanambara fa « ny fanotronana an’i Valérien aloha no laharam-pahamehana » hoazy ireo. Misy amin’izy ireo aza no sahy nilaza fa rehefa azony ny vola izay takiany dia « milamina » izy fa tsy mila miaraka amin’ny mpiasam-panjakana izany. Mipetraka ny fanontaniana hoe : iza no tena tonga saina tsara amin’ny zava-misy amin’izao fotoana ?
Fanoherana marin-drano an-dRajoelina : ho samborina koa izany ny Amerikana ? (+vidéos)
Notsorin’ireo parlemantera Amerikana mandalo eto Madagasikara androany fa tsy mankato an’i tgv velively izy ireo. Noporofoiny tamin’ny fandaharam-potoanany izany : nihaona tamin’ny praministra sy ny lehiben’ny filan-kevitra ambony ary ny lehiben’ny kongresin’ny tetezamita izy ireo saingy tsy nieritreritra akory ny hitsidika ny mpibodo toerana ao Ambohitsorohitra. Raha ny fanazavan’izy ireo dia adidin’ny mpitondra voalohany ny mitsinjo ny mahasoa ny vahoaka saingy tsy imasoan’i tgv izany ka tsy azon’ny Etazonia ekena.
Isan’ny tena nanterin’ny delegasiona ny tokony hanajana ny fahafahan’ny rehetra maneho hevitra sy ny fahalalahan’ny tontolon’ny fanaovan-gazety. Teboka nomarihin’izy ireo tamin’ireo rehetra nihaona taminy ihany koa ny lanjan’ny fanajana ny zon’olombelona ary isan’ny tsy ankatoavany an-dRajoelina ny tsy fahatomombanan’izany. Nomarihin’ireo parlemantera Amerikana kosa anefa fa manohana ny tondro zotra amin’ny maha-drafitra na « processus » fandaminana ny olana eto Madagasikara ny Amerikana saingy ilay miziriziry ho filohan’ny tetezamita no tsy ankatoaviny. Raha ny lazan’io mpitondra tsy mahazo fankatoavana io dia famoretana no setrin’ny fanoherana ka asa izay hataon’ny amin’ny Amerikana sy ny masoivohony eto amintsika.
Olom-panjakana farany nihaona tamin’ireto vahiny ireo ny filohan’ny kongresy izay nankasitraka ny fahavononan’izy ireo nijery ifotony ny toe-draharaha marina eto Madagasikara. « Efa mijaly sy mahantra loatra ny vahoaka Malagasy » hoy i Mamy Rakotoarivelo « ka antenaina hitondra herijika vaovao izao fandalovan’ireto vahiny ireto izao ». Raha araky ny nambaran’ity olom-boatendry ity dia nanome toky ny handray anjara hanafaingana ny fihaonan’ny Filoha RAVALOMANANA sy i tgv ireto parlemantera Amerikana ireto. Fihaonana izay andrandrain’ny maro hanokatra ny lalan’ny fivoahana amin’ny krizy.
Pr. Ranjeva Raymond : « oui – oui » no vahaolana tokana (+vidéos)
« Tsy maintsy milatsaka ho fidiana izy mirahalahy mianaka » hoy ny Pr. Ranjeva Raymond raha nitondra ny heviny manoloana ny raharaham-pirenena izy. Nambarany fa ny Filoha RAVALOMANANA no naongan’i tgv sy ny namany ary io no niantombohan’ny krizy. Eo ihany koa no mampikatso ny fanatanaterahana ny tondro zotra ka zary sakana tsy mampivaha ny olana amin’izao fotoana. Ny fanombohana izany sapanana vaovao hivohana amin’ny krizy izany dia ny fihaonan’ny Filoha RAVALOMANANA sy ny mpitarika ny mpanongam-panjakana.
Nambaran’ity mpitsara irasaim-pirenena ity fa efa tamin’ny 10 febroary 2009 ny tenany no nanolo-kevitra ny tokony nihaonan’ny roa tonta saingy notsipahin’ny mpanohana ny andaniny sasany izany na dia efa neken’ny roa tonta mpandray anjara mivantana aza. Tonga eo amin’ny fotoana tokony hanaporofoana amin’ny vahoaka ny fahatsiarovan-tenan’ny tsirairay izao ka mba tena « tsy ho mpangataka atiny marina ny valala tsy mandady harona amin’ny fitsinjovana ny hoavin’ny Firenena » hoy hatrany Ranjeva Raymond. Ny « oui – oui » arak’izany dia manery azy mirahalahy naongana sy mpanongana hiatrika ny fitsaram-bahoaka amin’ny alalan’ny fifidianana ho Filoham-pirenena. Tsy hisy afaka hanao kobaka am-bava amin’izay fotoana izay fa ny feon’ny vahoaka no hiteny sy hisafidy izay tiany hitondra ny Tanindrazana.
Tsy natao ho famoretana ny lalàna
Ampiasain’ny mpitondra amn’izao fotoana ho famaizana ny mpanohitra azy hatrany ny lalàna. Indrindra rehefa eo am-pototry ny vahaolana hivoahana amin’ny krizy dia atao fitaovana hanampenam-bava sy hampikatsoana ny tondro zotra izany. Araka ny fanazavana nentin’ny Profesora Ranjeva amin’ny maha-mpahay lalàna azy anefa dia mamela ny rehetra hisitraka ny zony koa ny lalàna fa tsy natao ho famaizana fotsiny akory. Ny andininy faha-31 ao amin’ny satan’ny Firenena mikambana rahateo dia mametraka ho lohalaharana ny famahana ny olana noho izany tsy tokony hatao fitaovana tsy hahitam-bahaolana izay lalàna indraindrain’ny mpitondra. Tsy azo lavina rahateo fa raha ezahina hosoran-drà ny Filoha RAVALOMANANA dia tsy afa-miala amin’ny fifanarahan’i Cotonou i tgv satria mpanongam-panjakana. Tsy hamaha olana anefa ny fiziriziriana amin’izany fa izay hampitsahatra ny krizy no tokony imasoana.
Tondro zotra : ny fampiharana azy manontolo ihany no vahaolana (+vidéos)
Nambaran’ny tomponandraikitry ny birao fifandraisan’ny SADC androany tetsy Ankorondrano fa « tsy misy ankoatra ny fanatanterahana ny tondro zotra iray manontolo no vahaolana amin’ny krizy ».Tonga nanatitra taratasy ho fitakiana ny hanatanterahana ny fihaonan’ny Filoha RAVALOMANANA sy tgv eto Madagasikara mantsy ny Tiakao I Madagasikara sampana Antananarivo renivohitra.
Natolotra ireto iraka maharitra avy amin’ny SADC ireto izany taratasy izany ary nisy ny tafa fohy nifanaovan’ny roa tonta. Namafisin’ireo mpandala ny ara-dalàna tamin’izany fa isan’ny tena nimatesan’ny mpiara-dia amin’ny Filoha RAVALOMANANA ny andininy faha-20 ary io ihany koa anefa no tena olan’ny mpanongam-panjakana. Nambaran’i Sandile Schalk ary fa « tsy maintsy hisy ny fihaonana ary ny hijerena ny fomba hanatanterahana manontolo ny tondro zotra no tena anton’izany ».
Amboletra … amboletra … amboletra hatrany !
Samy manana ny laharam-pahamehany tokoa eo amn’ny fikatsahana izay mety vahaolana amin’izao krizy izao. Niantso fivoriana tsy ara-potoana faha-6 ho an’ny parlemanta indray ny avy ao Ambohitsorohitra amin’izao fotoana izao. Volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana filoham-pirenena voalohany sy ny fifidianana solom-bavam-bahoaka voalohany amin’ny repoblika manaraka no natolotra ho dinihin’ny parlemanta nanomboka androany. Raha ho an’ny Ankolafy RAVALOMANANA manokana dia tokony tsy hirotorotoana ny fanaovana izany mba tsy hiteraka krizy vaovao indray. Raha hevitry ny mpiara-dia amin’ny Filoha RAVALOMANANA dia tokoy miandry ny fihaonan’izy mirahalahy mianaka farafaharatsiny vao niroso amin’izay mety fandinihana ny lalàna toy itony. « Maro ny tsy mahatsapa fa tsy demokratika ny fiaraha-mitantana fa miorina amin’ny teny ierana » hoy ny sekretera jeneralin’ny TIM.
Mpiasam-panjakana : tsy ho ela ny fitokonana faobe (+vidéo)
Mbola fanonganam-panjakana no nazahoana fitondrana dia efa izao no ataon’i tgv sy ny namany. « Maika izany raha sanatria ka lany amin’ny fifidianana ireo ». Nentin’ny « cellule de crise interministérielle » nampieritreretana ny mpiasam-bahoaka maro izany androany. Nanao fivoriam-be handinihana ny fomba azahaoana manohy ny tolona izay atrehin’izy ireo manko ny mpiasam-bahoaka androany. Tapaka tamin’izany ary fa ny kianjan’ny 90 Ariary fitoloman’ny SEMPAMA amin’izao fotoana no hiarahan’ny mpiasam-bahoaka rehetra maneho ny fitakiany.
Hanomboka rahampitso 03 jolay izany ary hizotra miandalana mankany amin’ny fandraisan’anjaran’ny sendika rehetra manerana ny Nosy mialohan’ny 11 jolay hoavy izao. Feno ny kapoakan’ny mpiasam-panjakana ka handray andraikitra izy ireo. Tsy hatao mirotoroto anefa izany fa handeha tsikelikely mba ahafahana mampandray andraikitra ny rehetra. Raha ny tetiandro efa fantatra aloha hatreto dia ny SECES no hanomboka izany avy hatrany ary hanaraka tsy ho ela ny mpitsara izay hanao fivoriam-be amin’ny 06 jolay hoavy izao. Notsorin’ny mpandrindra anefa fa raha mbola mitohy ny fampihorohoroana avy amin’ny FATE dia hanaovan’izy ireo ampamoaka ny momba ireo tomponandriakitra manao antsojay amin’izay mpiasam-bahoaka mitolona.